Sida loo dar gaabis Motion Saamaynta in Windows Live Kan sameeyey Movie
> Resource > Windows > Sida loo isticmaalo Windows Live Movie Kan sameeyey gaabis Motion Saamaynta
Saamayn mooshin gaabis ah waa mid ka mid ah saamaynta video ugu caansan. Nasiib wanaag, Windows Live Kan sameeyey Movie bixisaa hawsha waxtar leh si aad u yarayso aad videos sidoo kale soo bandhigidda si fiican ama si fiican video saamayn. Waa arrin aad u sahlan in ay isticmaalaan Windows Live Movie Kan sameeyey dhaqaaq tartiib ah shaqada. Just heli Windows Live Movie Kan sameeyey rakibay oo raac tilmaan-hoose si ay u isticmaalaan saamayn mooshin ka raagay in Windows Live Movie abuuray.
Sida loo hoos videos in Windows Live Kan sameeyey Movie
Tallaabada 1. Ku dar sawiro iyo videos in Windows Live Kan sameeyey Movie
Guji "Add videos iyo sawiro" xitaa dooro videos iyo sawiro laga aad computer ku darto. Waxaad kale oo jiidi karaan jeedi videos iyo sawiro in storyboard ah.
Tallaabada 2.-deji videos in Windows Live Kan sameeyey Movie
Si aad hoos videos, dooro video clip iyo tab Edit ku hoos "Video Tools" dooran xawaare (ku xiran tahay sida aad u rabtid in la dadajiyo video ah ama waxaa hoos).
Wixii dheeraad ah oo ku Kan sameeyey talooyin Windows Live Movie, fadlan tag sida loo edit videos in Windows Live Movie Kan sameeyey .
By jidkii, Windows Live Movie Kan sameeyey run ahaantii waa tafatirka software free video wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, marka la barbar dhigo kale software video tafatirka, waxaa ka maqan muuqaalada qaar ka mid ah. In aad fikirka ah oo ku saabsan wax software video tafatirka ka fiican tahay Windows Live Movie Kan sameeyey, kuwaas oo hoos u dhigi kara saamaynta mooshinka iyo qalab edting awood leh waqti isku mid ah?
More Xoog Video Movie Making hakin kartaa Down Videos
Wixii video filim samaynta, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) si ay u sameeyaan filim cajiib ah ka videos gurigaaga. Dhammaan qaabab video caanka ah waxaa taageera oo badan oo free video saamaynta kala guurka ayaa la siiyaa aad si aad videos dheeraad ah oo siman. Iyadoo interface ku ogaado, xitaa bilowga ah ka dhigi kartaa filimada cajiibka leh this software editor video . Ka sokow, aad si toos ah u gali kartaa adiga video in YouTube wadaaga qoyska iyo friends.What yahay ciyaaryahanka ugu fiican? Ka dib markii version 3.1.1 bilaabay, waxaa jira qaababka tafatir dheeraad ah oo gaar ah sida Muuqaal Ogaanshaha, Close-up, Jump Goo, Muuse, Shift Janjeeri, Picture-in-Picture, Toos off, Kala Audio, Radidiyaha Speed. Dhaqso si aad u hesho maxkamadda free of Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) si aad xaalkaa cajiib ah videos hadda! (Windows iyo Mac version waxaa laga heli karaa!)